Iifayile ziyafumaneka kwi-Intanethi nge-OneDrive > UVielhuber uDavid
Iifayile ziyafumaneka kwi-Intanethi nge-OneDrive10
Ukuba OneDrive, Idropbox, Google Drayivu, OwnCloud, Ibhokisi.net: Nokuba yeyiphi ibhokisi ozigcina kuyo iifayile-iinkonzo ziphantse zafana. Abaxhasi ziyafumaneka kuzo zonke iidesktop kunye neesistim zeselfowuni, iifayile ezingafakwanga ukubethelwa ngokusemgangathweni kunye neendlela zokwabelana ezahlukileyo kuphela kumda. Kodwa i-OneDrive, edityaniswe kwinkqubo ukusukela kwiWindows 8.1, inento ekhethekileyo: ziifayile kuphela ezifumaneka kwi-Intanethi.
Oku kwenza ukuba kube nakho ukufikelela kwisiseko sedatha yonke ngaphandle kweefayile ezithatha indawo yokugcina ebonakalayo. Ulwazi lweemeta kuphela njengamaxesha e- MAC agcinwa ngaphandle kweintanethi, ukuze iifayile zizive ngathi ziyafumaneka kwalapha ekhaya. Ukuba uvula ifayile kwi-Explorer efumaneka kuphela kwi-intanethi, ikhutshelwa ngokuzenzekelayo ngasemva kwaye yenziwe ifumaneke ngokusisigxina ngaphandle kweintanethi.
Kuphela yikholamu "yokuFumaneka" ebonisa kuphela ukuba zeziphi iifayile ezikhoyo
Iifayile ezikhoyo kwi-Intanethi zinokufumaneka kukhangelo lweWindows. Imenyu yokuseta inokusetyenziselwa ukwenza zonke iifayile kwihlabathi liphela zifumaneke ngaphandle kweintanethi okanye kwi-intanethi kuphela-ngonqakrazo lwasekunene kwi-Explorer unokulawula iifayile kunye neefolda ezizodwa ngendlela eyimbumba. Ngomsebenzi omtsha, iMicrosoft idale ukusebenza okuphezulu kakhulu kunye nenqaku eliyimpumelelo eligubungela ezinye iikhonsepthi ezinje ngokungqamanisa okukhethiweyo kweDropbox.